ကောင်းကင်ကို: သေချင်နေတဲ့ လူလိမ္မာ (ဝတ္ထုတို) ("သေဆုံးတတ်သည်" စာအုပ်မှ)
သေချင်နေတဲ့ လူလိမ္မာ (ဝတ္ထုတို) ("သေဆုံးတတ်သည်" စာအုပ်မှ)
ကျော်ညိုသွေး၊ ခိုင်စိုးလင်း၊ ညီဇံလှ၊ တူးတူးသာ၊ တေဇာ (လရောင်လမ်း)၊ နေဦး၊ နန်းညီ၊ ပန်ဒိုရာ၊ မိုးလှိုင်ည၊ မယ်ကိုး၊ မောင်တေလေ၊ လင်းဒီပ၊ သက်ထွေး၊ ဟန်သစ်ငြိမ်၊ သြမြိုင် နဲ့ ကျနော်တို့ ပါဝင် ရေးသားထားတဲ့ “သေဆုံးတတ်သည်” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲကဟာ ကို နည်းနည်းလေး ပြန်ပြင်ထားတာပါ။
download link http://www.mediafire.com/view/?gjela5a85gkqzm2
စာရေးဆရာ တယောက်က လူ့ဘဝကို ဘတ်စ်ကားနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းပြီး ဥပမာ ပေးဖူးတယ်။ တယောက်နဲ့ တယောက် ဆုံစည်းမှုဆိုတာ ဘတ်စ်ကားကြပ်ကြပ်ထဲက ခဏလေး ဆုံစည်းမှုလိုပဲတဲ့။ ဘတ်စ်ကားက ကြပ်လွန်းတော့ တယောက်နဲ့ တယောက် နင်းမိတာတို့ ထိခိုက်မိတာတို့ ရှိမယ်။ ခဏတာ လေးမို့ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတဲ့။
ဒါပေမယ့် သူအခု ဆုံနေရတဲ့လူ၊ သူ့ကိုလိုက်နှောင့်ယှက်နေတဲ့ လူက ခဏလေး မဟုတ်ဘူး။ သူလူမှန်းသိစ အရွယ်ကနေ ခုချိန်ထိ ထာဝရ လိုက်နှောင့်ယှက်နေတာ။ သူဆက်ပြီး သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။
ဒါနဲ့ သူ ကြံဖန်ပြီး ခွင့်လွှတ်တဲ့နည်းတွေ လိုက်စဉ်းစားကြည့်တော့ နည်းတခုကို သတိရသွားတယ်။ အဲဒီ့နည်းအရ ဆိုရင်တော့ ကိုယ်နဲ့ သံသရာမှာ အမျိုးမတော်ဖူးတဲ့သူ မရှိဘူးတဲ့။ ကိုယ် ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့သူ နဲ့ ကိုယ်နဲ့ သံသရာမှာ ဆွေမျိုး တနည်းတဖုံ တော်စပ်ခဲ့ဖူးမှာပဲလို့ တွေးပြီး ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတဲ့။ အဲဒီ့မှာ သူဦးနှောက် ပိုခြောက်သွားပြီးတော့ စိတ်ထဲက ရေရွတ်လိုက်တယ်။
“ငါနဲ့ငါ သံသရာမှာ ဘာတော်ခဲ့ပါသလဲ”
သူ့ကို သူကိုယ်တိုင်က လိုက်နှောင့်ယှက်နေတာ ကြာလှပြီ။ သူစာအုပ် တအုပ်ဖတ်ပြီဆို စာရေးသူရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုတွေကို လာပြောပြီ။ တရားနာပြီဆိုရင်လည်း အဲဒီ့တရားရဲ့ ဟာကွက်တွေကို လာပြောပြီ။ သြော်…သူ့စိတ်ထဲကနေ ‘နေခြည်’ကို ထုတ်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တုန်းကလည်း…
ဖယောင်းတိုင်လေး မကုန်ခင် ဒီ ခြောက်ခြားစရာ တစ္ဆေဇာတ်ကို သူ ဆက်ဖတ်ရမလား။ ဒါမှမဟုတ် ဖယောင်းတိုင်လေးကို မှုတ်ပြီး စောစော အိပ်လိုက်ရမလား။ သေချာတာ တခုကတော့ သူဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင်ပဲ တွေးနေရင် တစ္ဆေဇာတ်လမ်းလည်း မဖတ်လိုက်ရ၊ စောစောလည်း မအိပ်လိုက်ရပဲ ဖယောင်းတိုင်လေး ကုန်သွားတာပဲ အဖတ်တင်မယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ရှုံးရင်တောင်မှ စိတ်ပဋိပက္ခကြောင့် စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေဖြစ်ပြီး ရှုံးရတာထက်စာရင် ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ရှုံးတာက တော်သေးတယ်လို့ သူထင်တယ်။
အရှုံးဆိုတာ ချိုမြိန်တဲ့ ဝိုင်အရက်မှ မဟုတ်တာ။ သူ ဘာလို့ အချိန်ဆွဲပြီး သောက်နေရမှာလဲ။
ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် ခေါင်းပန်းလှန်တဲ့ နည်းကိုတော့ သူမသုံးချင်ဘူး။ အဲဒါက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကြွေစေ့တစေ့လောက်မှ တန်ဖိုးမထားတဲ့လူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်လို့ သူယူဆတယ်။
ဒီတော့ ပြဿနာကို အဖြူအမည်း မဆုံးဖြတ်ခင်မှာ သူ့အနေနဲ့ တွေးခေါ်သယောင်ယောင် လုပ်ဖို့တော့ လိုလာပြီ။ စဉ်းစားခြင်းဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ကိုယ်သန်ရာသန်ရာကို လိုသလို ဆွဲတွေးတာတွေ ဘာတွေ လုပ်ဖို့လိုလာပြီ။ ဒါမှလည်း လိုအပ်လာရင် အကောင်းဆုံးစဉ်းစားခဲ့သားပဲလို့ တွေးပြီး စိတ်ဖြေလို့ ရမယ် မဟုတ်လား။
သူ့ဘဝ ဟိုးအောက်ဆုံးအမြစ်နားအထိ လက်တံရှည်ရှည်နဲ့ ဒုက္ခလှမ်းပေးနေတဲ့ မေးခွန်းကို Yes or No တခုခု ဖြေဖို့ လုပ်မှ ဖြစ်တော့မယ်။
တွေးရင်းတွေးရင်းနဲ့ Albert Camus ရဲ့ စကားတခုကို သူ သတိရလို့ ပြုံးလိုက်မိသေးတယ်။
အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေထဲမှာ တကယ်နက်နဲတဲ့ ပြဿနာဆိုလို့ တခုပဲ ရှိတယ်တဲ့။ အဲဒီ့အကြောင်းအရာကတော့ ‘suicide’ တဲ့။ အခု သူအဲဒီ့အကြောင်းအရာကို ကိုင်တော့မှာဆိုတော့ အနက်နဲဆုံး အတွေးအခေါ် ပြဿနာတခုကို စဉ်းစားခြင်းလို့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် နာမည် လျှောက်တပ်လို့တောင် ရသေးတယ်။
ရုတ်တရက် ကြားလိုက်ရတဲ့ စက်နှိုးသံကို သူမခံနိုင်လို့ နားတွေကို အတင်းပိတ်လိုက်ရတယ်။
သူအသံကြားလို့ ဖျတ်ခနဲ ကြည့်လိုက်တော့ တီဗွီဖန်သားပြင်မှာ နေခြည်ရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာ။ သူ အံ့သြသွားတယ်။ နေခြည်ရဲ့ ရုပ်ပုံက မှောင်ရိပ်သန်းပြီး ဝါးနေတယ်။ သူ ဖန်သားပြင်ရဲ့ အလင်းရောင်ကို တင်ဖို့ အလင်းအမှောင်ချိန်တဲ့ ခလုတ်ကို လိုက်ရှာလိုက်တယ်။ မတွေ့ဘူး။ နေခြည့်ပုံကလည်း ကြည့်ရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ဝါးပြီး ပျောက်သွားတယ်။
သူ့ပါးပေါ်ကို မျက်ရည်တွေ စီးကျလာတယ်။
သူ့ရှေ့က အရာဝတ္ထုကလည်း သူစိုက်ကြည့်ရင်းကနေ တီဗွီဖန်သားပြင် တခု မဟုတ်တော့ပဲ ကြည့်မှန်တချပ်ဖြစ်သွားပြန်တယ်။ အဲဒီ့ကြည့်မှန်ချပ်ထဲမှာတော့ ချောင်ကျနေတဲ့ သူ့မျက်နှာစစ်တလင်းမှာ သောကနှစ်သွယ် စီးဆင်းလို့။
မှန်ထဲက သောကကောင်ရဲ့ ရှင်သန်နေမှုဟာ ဘာအကျိုးရှိပါသလဲ။
သေဆုံးခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး စာရင်းတခု လုပ်ဖို့ သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကောင်းကျိုး နံပါတ် (၁) အဖြစ် သူ့စာရင်းထဲမှာ ဒီလို ချရေးလိုက်တယ်။
နေခြည်နဲ့ ပြန်တွေ့ရနိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်စရာ လိုမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
ကောင်းကျိုး နံပါတ်(၁) မှာတင် အချက် ၂ချက်ပါနေတာကို သူသတိထားမိတယ်။ ကိစ္စမရှိဘူး။ ဒါက သူတယောက်တည်း သိရုံ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ အထောက်အကူပြုရုံ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ စာရင်း။
သေခြင်းတရားဆိုတာ ဘာလဲ။ တချို့ကလည်း သေတတ်အောင် ပြင်ဆင်ထားကြတဲ့။ သေတာတောင်မှ နည်းနာတွေ လိုသေးသလားကွယ်။
ရှင်သန်ခြင်းမှာသာ ပြင်ဆင်မှု မရှိပဲ ရှင်သန်လို့ မရတာ။ သေခြင်းကတော့ ပြင်ဆင်မထားလည်း အမှတ်တမဲ့ ရောက်လာပြီး ဒီအတိုင်းပြီးသွားတာပဲ။ သူ့အထင်မှာတော့ သေတာထက်စာရင် ရှင်ရတာက အဆပေါင်းများစွာ ပိုခက်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ရှင်နေတုန်းမှာပဲ ရှာဖွေရ၊ ရုန်းကန်ရ၊ အလုပ်လုပ်ရ၊ ကျောင်းတက်ရ၊ ငိုရ ယိုရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်ရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်က လက်ခံထားတဲ့ အပေါ်ယံ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို လိုက်နာရနဲ့။
ဒီကြားထဲ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ တခါတလေ ပျော်ရ၊ ပြုံးရရင်တောင် အဲဒါတွေက အကုသိုလ် ဘာညာနဲ့ အပြစ်ကင်းတဲ့ အပျော်မျက်လုံးလေးတွေကို သဲနဲ့လာပက်ကြသေးတယ်။ အသက်ရှင်နေတုန်းမှာ သဘာဝအလျောက် ပျော်ပါစေ တော့လား။
တချို့လူတွေ ရှိသေးတယ်။ သေခါနီးလူကို ဘဝကူးကောင်းအောင် ဆိုပြီး သေခါနီးမှာ ဟိုဟာတွေရွတ်ပေး၊ ဒီဟာတွေ ရွတ်ပေးနဲ့။ သူတွေးရင်း ရယ်ချင်လာတယ်။ အဲဒါက ဘာနဲ့ တူတုန်းဆိုတော့ တနှစ်လုံး ပေပေတေတေနဲ့ စာမလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတယောက်ကို စာမေးပွဲဖြေဖို့ နာရီပိုင်းအလိုမှ ဖုတ်ပူမီးတိုက် သင်ပေးနေတာနဲ့ တူတယ်လို့ သူတွေးမိတယ်။
သူစာရင်းထဲမှာ ဒီလို ချရေးလိုက်ပြန်တယ်။
ရုန်းကန်စရာ မလိုတော့၊ ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်စရာ မလိုတော့။
ဒုက္ခဆိုတာ တကယ်တော့ ဒုက္ခမဟုတ်သေးဘူး။ ဒုက္ခမှန်းသိသွားမှသာ ဒုက္ခက ‘ဒုက္ခ’ဆိုပြီး တရားဝင် ဖြစ်သွားတာ။
လူတွေများ ကံဆိုးလိုက်ပုံက မွေးလာလို့ အရွယ်လေး နည်းနည်းရောက်လာတာနဲ့  လူတိုင်းသေရမယ်ဆိုတာကို သိလာကြတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေရဲ့ အသိဥာဏ်က ရောဂါကိုသာ သိနိုင်စွမ်းရှိပြီး ဆေးကို မသိနိုင်တဲ့ အသိဥာဏ်မျိုး။ တနည်းအားဖြင့်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သွေးပျက်အောင် နှိပ်စက်ရုံလောက် အသုံးတည့်တဲ့ အသိဥာဏ်မျိုး။ သူချရေးလိုက်တယ်။
စောက်သုံးမကျတဲ့ တဝက်တပျက် အသိဥာဏ်တွေ မရှိတော့။ ပြီးတော့ လူ့ဘဝက ရခဲတယ်တဲ့။ ဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ ကော်တာပဲ။ လူသာပြန်မဖြစ်ခဲ့ရင် ဒုက္ခကို ဒုက္ခမှန်းမသိလို့၊ ခံစားနိုင်စွမ်းနိမ့်လို့ ဒုက္ခတချို့ဟာ ဒုက္ခမဟုတ်တော့။ ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်စရာ မလိုတော့။
တကယ်ဆို လူတိုင်းနီးပါးက အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေသင့်တယ်။ နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းဟာလည်း သူတို့နိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေဟာ စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်လာပြီ၊ ရာနှုန်းပြည့်နီးပါးဖြစ်အောင် ဆက်လက်ကြိုးစားမယ် ဘာညာနဲ့ အပြိုင်အဆိုင် ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာ ကြေညာ နေသင့်တယ်။
အပြည့်အစုံ ပြောရရင်တော့ လူတွေဟာ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေတာနဲ့ တပြိုင်တည်းမှာပဲ စားစရာ သောက်စရာတွေ ဖူလုံနေပြီး လုပ်ချင်တာကိုပဲ စိတ်ကြိုက် လုပ်နေခွင့် ရသင့်တယ်လေ။
အဝတ်လျှော်စက်တွေ၊ အကြွေစေ့နဲ့ အအေးဗူးတွေ ဘာတွေ ရောင်းတဲ့ စက်တွေ၊ ခိုင်းစားစရာ စက်ရုပ်တွေကို ဘာလို့ တီထွင်ထားကြသလဲ။ ကြိုးစားပမ်းစားလည်း တီထွင်ရသေးတယ်။ စက်တွေကပဲ အလုပ်လုပ်ပြီး လူတွေက အေးအေးဆေးဆေး ကြိုက်ရာလုပ်နေနိုင်တဲ့ ဘဝမျိုးကို ရသင့်တယ်မဟုတ်လား။
ခုတော့ သတ္တဝါတွေအားလုံးထဲမှာ တပတ်ကိုခြောက်ရက်လောက် အချိန်တွေထဲမှာ အကျဉ်းကျနေတာဆိုလို့ လူဆိုတဲ့ ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေပဲ ရှိတယ်။ အချိန်ဇယားနဲ့ အလုပ်လုပ်ရ၊ အချိန်ဇယားနဲ့ စားရ၊အိပ်ရ၊ အချိန်ဇယားနဲ့ ချစ်တင်းနှောရနဲ့။
အချိန်ဆိုတာကို လူတွေပဲ ပညတ်။ ပြီးတော့ အချိန်ထဲမှာ လူတွေပဲ အကျဉ်းကျ။ ဘာသာစကားတွေ၊ ပညာရပ်တွေ တီထွင်။ ပြီးတော့ အဲဒါတွေကို လေ့လာရ၊ သင်ရနဲ့ အကျဉ်းကျ။
ဒါနဲ့များ ခပ်တုံးတုံးငနဲတွေက သူ language ဘယ်နှစ်မျိုးတတ်သလေး ဘာလေးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်လောက်အထိ နှိပ်စက်ထားသလဲဆိုတာကို ဘုမသိ ဘမသိ လာကြွားကြသေးတယ်။
ပြီးတော့ လူတွေလေ့လာတယ် သိလာတယ်ဆိုတာကလည်း အဖြေတခုရတိုင်း မေးခွန်းတွေ ဆယ်ခုမက ထပ်ပေါ်လာတာမျိုး။ ဆက်ပြီး လိုက်ပေတော့ပဲ။
ဥပမာ ရှေးကလူတွေရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုကြောင့် မဆီမဆိုင် စာတွေကဗျာတွေထဲမှာ အချောင်နာမည်ရနေတဲ့ ‘လ’ ဆိုတဲ့ မစွမ်းမသန် အရန်ဂြိုလ်စဂြိုလ်န ကိုပဲကြည့်။
အစကတော့ ‘လ’ကို နတ်သားလိုလို၊ လင်းနေတဲ့ နတ်ဘုရားတပါးလိုလို လူတွေ ထင်နေကြတုန်းကတော့ အဟုတ်။နတ်သားတို့ နတ်ဘုရားတို့ဆိုတာကို သွားလေ့လာရင် ကျိန်စာသင့်သွားမယ် မဟုတ်လား။ ကြည့်ပါလား။ ‘လ’ က နတ်သားဖြစ်တယ် ဆိုတာကို မယုံသလို ဘာလိုလိုပြောမိခဲ့ကြတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ရှစ်ရာကိုးရာ က ကောင်တွေ အခုဆို အကုန်သေပြီလေ။ သေမှာပေါ့။ နှစ်ပေါင်း ရှစ်ရာကိုးရာ တောင် ရှိ…အဲလေ သွားစော်ကားတာကိုး။
အဲလိုယုံကြည်နေတုန်းကတော့ ယုံကြည်မှုဆိုတော့ ဘာမှ ဆန်းစစ်နေစရာ မလိုဘူးလေ။ အလုပ်မရှုပ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း စာပေတွေ၊သီချင်းတွေ၊ကဗျာတွေက “ယုံကြည်ချက်နဲ့ အသက်ရှင်ကြဖို့” အာပေါက်အောင် တိုက်တွန်းနေကြတာ ဖြစ်မယ်။ တွေးရတောရ လေ့လာရတာတွေနဲ့ အလုပ်မရှုပ်စေချင်တဲ့ စေတနာတွေ ဖြစ်မှာပါ။
ခုတော့ နေရဲ့အရောင်နဲ့ တကိုယ်လုံးပြောင်နေတဲ့ အဲဒီ့ ‘လ’ စုတ် ‘လ’ ပဲ့က နတ်ဘုရား မဟုတ်ပဲ ဂြိုလ်ရံလဆိုတာလည်း သိသွားရော သူ့ရဲ့ structure တွေ geology တွေ လေ့လာရ၊ အပူချိန်တွေ လေ့လာရနဲ့ အလုပ်ကို ရှုပ်သွားတော့တာပဲ မဟုတ်လား။
သူ သေခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးကို စဉ်းစားရင်းနဲ့ အတွေးနည်းနည်းချော်သွားတယ်။ သေခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးနံပါတ် (၄) ကို သူဒီလို ချရေးလိုက်တယ်။
အချိန်ရဲ့ အကျဉ်းသားအဖြစ်က လွတ်မြောက်လာမယ်။ လိုက်လေ ဝေးလေဆိုတဲ့ အဖြစ်က လွတ်မယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို ဂရုစိုက်စရာ မလိုတော့။
“ဆရာ၊ ကျနော့်ရောဂါက ဘာရောဂါလဲ”
အဲလိုမေးသံတွေကို ကြားရင် သူအော်ရယ်လိုက်ချင်တယ်။ “ကိုယ့်လူရေ…ဆရာဝန်ကို သွားမေးမနေနဲ့။ ကျနော်ပြောပြမယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ ရောဂါက မွေးဖွားခြင်း လို့ ခေါ်တယ်”
ဟုတ်တယ်လေ။ သတ္တဝါတိုင်းဟာ မွေးလာပြီးကတည်းက သေဖို့သေချာပြီးသား။ ရောဂါနာမည်ကို ဘယ်လိုတပ်တပ် သေမှာက သေမှာပဲ။
ဒါကြောင့် တချို့အူတူတူ လူတွေက သူ့ကို ထမင်းစားဖို့ အသက်ရှင်နေတာလား၊ အသက်ရှင်ဖို့ ထမင်းစားနေတာလား၊ ဘာအတွက် အသက်ရှင်နေတာလဲလို့ မေးလာတိုင်း သူကခပ်သွက်သွက် ပြန်ဖြေလေ့ရှိတယ်။
“ကျနော် သေဆုံးဖို့အတွက် အသက်ရှင်နေတာ”
သူအဲလိုဖြေလိုက်ရင် မေးခွန်းရှင်တွေ မျက်နှာပျက်သွားကြတာ များတယ်။ ထားပါတော့။ မမှုပါဘူး။ သူတို့ ဘယ်လိုပဲ မျက်နှာပျက်ပျက် သူ့ကို ထောက်ခံမယ့်သူတွေက ရှိနေတယ်လေ။
“ကိုမာ” ရပြီး ပိုက်တန်းလန်းတွေက ပေးတဲ့အသက်လေးနဲ့ ဆက်ရှင်နေရတဲ့သူတွေ၊ ရောဂါကျွမ်းမှု အရသာကို တငုံချင်း စိမ်ပြေနပြေ ခံစားနေရတဲ့သူတွေရဲ့ လိပ်ပြာကောင်ကြီးတွေက တောင်ပံတဝုန်းဝုန်းခတ်ပြီး သူ့ အဆိုကို ထောက်ခံကြလိမ့်မယ်။ သူတို့ ခန္ဓာကောင်ကြီးတွေဟာ သေဆုံးဖို့ တမျှော်မျှော်နဲ့ အသက်ရှင်နေကြရတယ်ဆိုတာ။
သူ့အတွေးတွေကို စာရင်းထဲ ထည့်ဖို့ ဘောင်ဝင်မဝင် သူစဉ်းစားလိုက်တယ်။ သိပ်တော့ ဘောင် မဝင်လှဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်တတ်ကိုင်တတ်ရင် ဖြစ်ပါတယ်။
စာရင်းပုံစံခွက်ထဲမှာ သူလှည့်ပတ်ပြီး ထည့်လိုက်တယ်။
ဘယ်လိုကြွေးကြော်ပြီး ရှင်သန်ရှင်သန် နောက်ဆုံးမှာ တူညီတာ တခုကတော့ မသေဆုံးခင်လေး ရှင်သန် နေကြရတာပါပဲ။ ဒီတော့ လူ့မသိစိတ်ထဲမှာ သေဆုံးခြင်းက နောက်ဆုံးပန်းတိုင်လို ဖြစ်နေတော့တာပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း သေမှာ (တနည်းအားဖြင့်) ကိုယ့်အတ္တလေး မရှိတော့မှာကို အရမ်း ကြောက်နေကြတာ။ တကယ်ဆိုရင်တော့ ပန်းတိုင်ကို မရောက်မှာသာ စိတ်ပူရရိုး ထုံးစံ ရှိတယ်လေ။ ပန်းတိုင်ကို မြန်မြန်ရောက်မယ့်ကိစ္စမျိုးဆိုရင် လက်ခမောင်း ထခတ်သင့်တာပေါ့။
သြော်…နောက်အားသာချက်တခုက ပတ်ဝန်းကျင်တွေ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို ဂရုစိုက်စရာ မလိုတော့။
တကယ်ဆိုတော့ သေတယ်ဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ တာဝန် တခုကို ထမ်းဆောင်တာလို့လည်း ပြောလို့ရသေးတယ်။
ဥပမာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မသေဆေးတမျိုး ပေါ်လာတယ် ဆိုပါစို့။ သွားပြီ။ ကမ္ဘာကြီးတော့ ကမ္ဘာဖြစ်ရှုံးပြီ။ အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်ပြီ။ လူတွေ အကုန်လုံး မသေဖို့ ဆိုတာက မွေးဖွားခြင်း မရှိမှ ဖြစ်နိုင်မယ်မဟုတ်လား။ နို့မို့ဆို ကမ္ဘာကြီးမှာ လူတွေအကုန်လုံး ပြည့်ညပ် နေမှာပေါ့။ အခြေချစရာနေရာတွေ၊ အရင်းအမြစ်တွေ မလုံမလောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
သေဆုံးခြင်း မရှိဘူးဆိုပါတော့။ ကုလို့မပျောက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတခုခု အပြင်းအထန်ခံစားနေရတဲ့လူတွေ အတွက်လည်း တခုတည်းသော လွတ်လမ်းလေး မရှိတော့။ ထောင်နှစ်၁၀၀ မက ကျနေတဲ့သူတွေ အတွက်လည်း တခုတည်းသော လွတ်လမ်းလေး မရှိတော့။ စိတ်ဓာတ်တွေ ငရဲပြည်ရဲ့ ဟိုးမြေအောက်ခန်းထဲအထိ ကျဆင်းနေတဲ့သူတွေ အတွက်လည်း တခုတည်းသော လွတ်လမ်းလေး မရှိတော့။ မွေးဖွားခြင်း မရှိတော့ တနေ့လာလည်း ဒီမျက်နှာ….တနေ့လာလည်း ဒီမျက်နှာ! မေးလိုက်ရင် အသက်က ၁၆၀၀၊ အသက်က ၂၇၀၀! လူအိုတွေချည်း။ ဟား! တော်တော် စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းမှာပဲ။
ပြီးတော့ နှစ် ၁၀၀၀ နေလည်း ဒီလူတွေ၊ နှစ် ၂၀၀၀ နေလည်း ဒီလူတွေချည်းဆို ဒီလူ ဒီအိုင်ဒီယာ ဒီအတွေးအခေါ်တွေနဲ့ပဲ ကမ္ဘာကြီး ရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခြွေချခြင်းနဲ့ စောစော တာဝန်ထမ်းဆောင်သင့်တယ်လို့ သူတွေးလိုက်မိတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ…ဆရာသမား တယောက် website မှာ ရေးထားတဲ့ လေသံကို သူအတုခိုးလိုက်ပြီး သူ့စာရင်းထဲမှာ ဒီလို ချရေးလိုက်တယ်။
သေဆုံးခြင်း (ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေခြင်း)
လူတယောက် လူ့လောကမှ စောစောစီးစီး နေရာဖယ်ပေးခြင်းအားဖြင့် လောက တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် စဉ်းစားနေပြီ။ ထိုသူကား အခြားမဟုတ်။ မိမိကိုယ်တိုင်ပင် ဖြစ်တော့သည်။
သြော်… နောက်ထပ်ကောင်းကျိုးတခုကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို ဂရုစိုက်စရာ မလိုတော့။
စဉ်းစားရင်း စဉ်းစားရင်းနဲ့ စီမံကိန်း တသီတတန်းနဲ့ အသားတုံးကြီး တခုအကြောင်း သူ့ခေါင်းထဲမှာ ပေါ်လာတယ်။ အဲဒီ့အသားတုံးကြီးက အရာရာကို အချိန်အတိအကျနဲ့ စီမံအကွက်ချပြီးမှ လုပ်တတ်တဲ့သူ။ အိမ်သာတက်ရင်က အစ အချိန်အလကား မကုန်ရအောင် ဖတ်စရာ စာအုပ်တွေ တအုပ်ပြီး တအုပ် အမြဲပြင်ထားတတ်တယ်။ လုပ်ငန်းတခု လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း အာကာသဒုံးပျံ တစင်း လွှတ်တော့မယ့် အတိုင်း အချိန်ကို သေချာ တွက်ချက် ပြင်ဆင်ပြီး ကွက်တိဖြစ်အောင် လုပ်လေ့ရှိတယ်။ သေခြင်းတရားဆိုတာ နီးနီးလေး ဆိုတာကိုလည်း အဲဒီ့လူက သတိရှိလိုက်သေးတယ်။ နောက်တော့ အဲဒီ့လူ လုပ်ရမယ့် အလုပ်သစ်တခုက တနှစ်ကျော်လောက်ကြာမှာ။ အဲဒါနဲ့ အဲဒီ့လူက သေချာချင်တဲ့သူဆိုတော့ လုံလောက်တဲ့ ကျန်းမာရေး ရှိမရှိ သိအောင်လို့ ဆေးသွားစစ်တယ်။ ဆေးစစ်ချက် အရ ဘာရောဂါမှ မရှိဘူးတဲ့။ လုပ်ငန်းစလုပ်လို့ ရပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဆေးစစ်ချက်ယူပြီး ပြန်အလာ လမ်းဖြတ်အကူးမှာ ကားတိုက်ခံလိုက်ရပြီး ပွဲချင်းပြီး သေသွားတော့တယ်။
လက်ရှိ သူစဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းအရာအရ… အဲဒီ့လူရုတ်တရက်သေတာကို သံဝေဂ ရရမယ့်အစား အဲဒီ့လူ ကိုယ့်plan လေးနဲ့ကိုယ် မသေနိုင်တာကိုပဲ သူက သံဝေဂရနေတယ်။ မဖြစ်ဘူး။ အချိန်ရှိတုန်း မြန်မြန်ဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်မှ!
ကိုယ့်ကံကြမ္မာရဲ့ အရှင်သခင်ဟာ ကိုယ်တိုင် ဖြစ်သင့်တယ်လို့ လူတွေ ပြောပြောနေကြတယ် မို့လား။ ခရစ်တော်က အိပ်ဖို့ ခေါ်တဲ့အထိ၊ အလ္လာက အမိန့်ပေးတဲ့ အထိ၊ ကံကြမ္မာဆိုတဲ့ ရှုပ်ထွေးထွေး အစုအဝေးကြီးက ‘ဟေ့ယောင်..မင်းသေတော့’လို့ အလိုက်သိတဲ့ အထိ ဘာလို့ စောင့်နေရမှာလဲ။
“ငါသာလျှင် ငါ့ကံကြမ္မာရဲ့ အရှင်သခင် ဖြစ်ရမယ်ဟေ့” …သူယောင်ပြီး ကြွေးကြော်လိုက်တယ်။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အချိန် ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ အဆင်ပြေမယ့်နည်းနဲ့ ကြွေကျပစ်ရမယ်။ တခြားလူတွေကတော့ မေးချင်ကြပါလိမ့်မယ်။ သေခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် မပြဌာန်းရတော့ကော ဘာဖြစ်မှာ မို့လို့တုန်းလို့။
အဲလို သူ့ကိုမေးလာရင်တော့ မေးလာတဲ့သူတွေကို ဒုံးဝေးရန်ကော ဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့ သူကြည့်မိမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဟုတ်တယ်လေ။ ပျမ်းမျှခြင်း ဥပဒေသနဲ့ တွက်ကြည့်ရင် လူတွေဟာ ဘောလုံးပွဲ ကြည့်နေတုန်း နှလုံးခုန် ရပ်ပြီး သေနိုင်ချေ၊ စုံတွဲ ချစ်တင်းနှောနေတုန်း နှလုံးခုန် ရပ်ပြီး သေနိုင်ချေ၊ သူများမင်္ဂလာဆောင် (ဒါမှမဟုတ်) မွေးနေ့ တခုခုထဲမှာ အမင်္ဂလာကောင် ဆန်ဆန် ဂွတီးဂွကျ သွားသေနိုင်ချေ၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း တယောက်တည်း အခန်းထဲမှာ သော့ခတ်ပြီးနေနေတုန်း သေသွားတာ ရက်ကြာသွားမှ ဘေးခန်းတွေက အပုပ်နံ့ရပြီး သိသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ချေ…အဲဒါတွေက လူတသောင်းမှာ တယောက်လောက်တော့ ကြုံရနိုင်ချေ ရှိတာပဲ။ ထီပေါက်နိုင်ချေထက်တောင် ပိုများသေးတယ်။ အဲလိုသာ သေသွားရင် ခပ်နနကောင်တွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ခင်ဗျား အထူးအဆန်း မသာကောင်ဖြစ်ပြီး ခင်ဗျားတော့သွားပြီ။
သေဆုံးခြင်း (ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေခြင်း)
ငါသာလျှင် ငါ့ကြမ္မာ၏ အရှင်သခင် ဖြစ်သင့်သည်။ တော်ကြာ ဘုရားသခင်က ကိုယ့်နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ကျီစားနေမှဖြင့်….
နောက်ထပ်ကောင်းကျိုးတခုက ပတ်ဝန်းကျင်တွေ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို ဂရုစိုက်စရာ မလိုတော့။
သူ့နာမည်ကပဲ စီးနေလို့လား။ သူ့စာရင်းကို ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ကောင်းကျိုးတွေချည်း ခုနစ်ခု ဖြစ်နေတယ်။ ဆိုးကျိုးက တချက်မှ မရှိသေးဘူး။
သူ့စာရင်းကိုသူ တချက် ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ “ကောင်းကျိုး (၃)… စောက်သုံးမကျတဲ့ တဝက်တပျက် အသိဥာဏ်တွေ မရှိတော့” ဆိုတာ အရောက် မှာ သူတခုတွေးမိလိုက်ပြန်တယ်။ အဲဒီ့ တဝက်တပျက် အသိဥာဏ် ဆိုတာကြီးကလည်း လူနဲ့ အမြဲကပ်နေတာမျိုး မဟုတ်ဘူးဗျ။ စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ အခိုက်အတန့်တခုခုမှာ ကိုယ့်ဆီကနေ ကိုယ့်ဦးနှောက်ကြီးက ထွက်ပြေးသွားတတ်တယ်။ ဥပမာ ပရိသတ်ရှေ့ထပြော ခါနီးမှာ အကုန်မေ့သွားတာမျိုး။ ဒါမှမဟုတ် ဒေါသထွက်နေတဲ့ အချိန်မှာ အသိဥာဏ်လွတ်ပြီး လုပ်မိသွားတာမျိုး။ အဲဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး တလောက သူဖတ်ဖူးလိုက်တဲ့ ဆောင်းပါး တပုဒ်ကို ဝိုးတဝါး အမှတ်ရလိုက်တယ်။ စုံတွဲတွေ ချစ်တင်းနှောနေတဲ့ အချိန်မှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လက်တွေ မြောက်တက်သွားတာ၊ အော်တာတွေဟာ အဲဒီ့အချိန်မှာ အဲဒီ့အမျိုးသမီးရဲ့ ဦးနှောက်က စဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့ တချို့အစိတ်အပိုင်းတွေ အလုပ်မလုပ်တော့လို့တဲ့။ အမျိုးသားတွေလည်း အတူတူပဲ။ အထူးအဆန်းတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူးလေ။ အဲလိုအချိန်မှာ အတွေးနက်နေဖို့လည်း လိုမှ မလိုတာ။
ဘယ်လောက်ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်တဲ့ ပညာရှင်ကြီးတွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ၊ က္ကုနြေ္ဒရှင်ကြီးတွေပဲ ဖြစ်ပါစေ ဘဝမှာ ကိုယ့်ဦးနှောက် ကိုယ့်ဆီက ထွက်ပြေးသွားတာမျိုး ကြုံခဲ့ဖူးမှာပဲ။ အဲဒါမျိုးက အဆိုးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားချိန်မျိုးမှ ဖြစ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ကုသိုလ်လို့ထင်ရတဲ့ စိတ်ခံစားမှု အခိုက်အတန့်တွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဥပမာ တခုခုမှာ ယုံကြည်မှု လွန်ကဲတာမျိုး ပေါ့ဗျာ။ အလွယ်ဆုံး ဥပမာ ပေးရရင်တော့ဗျာ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ လူတွေ စကားပြောတယ်ဆိုတာကို သာမန်အခြေအနေ ဆိုရင် တယောက်မှ ယုံကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာသာရေး ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက် ရောက်သွားတော့ အဲဒါကို ဒဲ့ယုံတဲ့သူတွေလည်း လောကမှာ မနည်းဘူး။
ဘာသာရေးဆိုမှ သူ့သေခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး စာရင်းထဲမှာ ဘာသာရေးနဲ့ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်တာ မပါသေးတာကို သူသတိရသွားတယ်။ ဒါက ချန်ခဲ့လို့ မဖြစ်တဲ့ အရာပဲ။ တကယ်တော့ ဘာသာရေးတွေ ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားထဲမှာ သေခြင်းကလည်း မင်းသားတယောက်ပါပဲ။
သူ့အတွေးအခေါ်တွေက တိတ္ထိဆန်မှုတွေနဲ့ ဖူးပွင့်ဝေဆာတယ်။ တကယ်တော့ အကြောင်းအကျိုးမပြနိုင်သေးတဲ့ ပဟေဠိ အကောက်အကွေ့တွေကို လူတွေက ဘာသာရေးဆိုတဲ့ စင်တခုခုပေါ် တင်ပြီး ပသ နေကြတာပဲလို့ သူက ယူဆထားတယ်။ ဘန်ကောက်သွားတုန်းကလို စတိုးဆိုင် တဆိုင်ရှေ့ အရောက်မှာ ဆိုင်တံခါး အလိုအလျောက် ပွင့်သွားတာကိုသာ ကျောက်ခေတ်လူသား တယောက် ရုတ်တရက် မြင်သွားမယ်ဆိုရင် အီလက်ထရွန်းနစ် စနစ်မှန်း သိမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ကို နတ်ဘုရား တပါးလို့ထင်သွားပြီး ကိုးကွယ်မှာ သေချာတယ်။
သူက ဘုရားသခင်တွေကို မယုံကြည်တဲ့သူဆိုတော့ သူထာဝရငရဲမှာများ ကျနေမလား။ သူ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်။
“ထားပါတော့။ ခင်ဗျားကို ကျနော်က မသိဘူး၊ မသိလို့ မယုံဘူးဆိုပါတော့။ အဲလို ခင်ဗျားကို မသိရုံ၊ မယုံရုံလေးနဲ့ ခင်ဗျားက ကျနော့်ကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမယ် ဆိုရင် ခင်ဗျားတအား ကလေးဆန်တာပေါ့။ ဘုရားသခင်က အဲလို ကလေးဆန်ဆန် လူဆိုးကြီး ဟုတ်ပါ့မလား” လို့သူ အတွေးဝင်လာတယ်။
ပြီးတော့ မီးတွေ ရေတွေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ဖျက်ဆီးပစ်မယ် ဆိုတာကရော။ အာဏာရှင်တွေ လူတသိန်းလောက်ကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ရင်တောင် holocaust ဆိုတဲ့ ရာဇဝတ်မှု မြောက်သေးတာ။ ဘုရားသခင်က အဲလို ရာဇဝတ်ကောင် ဆန်ပါ့မလား။ တွေးရင်းနဲ့ သူ့စိတ်သက်သာသလိုလို ရှိသွားတယ်။
တကယ်လို့ ဘုရားသခင်ရှိနေရင်တောင် စာအုပ်ထဲက ဘုရားသခင်တွေနဲ့ တူမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခင် အစစ်ကြီး လူ့ပြည်ကိုဆင်းလာရင် လူတွေက သူတို့ထင်တာနဲ့ မတူလို့ ဘုရားသခင်အဖြစ် လက်မခံပဲ လိမ်လည်မှုနဲ့ ဖမ်းတောင်ဖမ်းနိုင်တယ်လို့ သူက တွေးလိုက်သေးတယ်။
ငရဲနဲ့ နတ်ပြည် ဆိုတာကိုတော့ သူက စံပယ်နံ့နဲ့ ညှော်နံ့ တပြိုင်တည်းသင်းနေတဲ့ ဝတ္ထုလို့ပဲ ယူဆတယ်။ ဝတ္ထုဆိုတဲ့သဘောက လက်တွေ့သိထားတာတွေကို စိတ်ကူးတွေရွှဲနေအောင် ထပ်လောင်းပြီး ရေးလေ့ရှိကြတယ် မဟုတ်လား။ ငရဲပြည်ရဲ့ နည်းပညာအဆင့်အတန်းကို ကြည့်လိုက်။ မစင်ဘင်ပုပ်တွင်းကြီးတွေ၊ မီးခဲတွေ၊ ပြာပူတွေ၊ အားလုံး လူ့ပြည်မှာ ရှိပြီးသား ဟာတွေချည်းပဲ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်တို့ပြီး နှိပ်စက်နည်းတို့ ဘာတို့ကျ မပါတော့ဘူး။ ဘယ်ပါမတုန်း။ ကျမ်းတွေရေးတဲ့ ခေတ်က လျှပ်စစ်ဓာတ်မှ မပေါ်သေးတာ။ ခုခေတ်လူ့ပြည်က ထောင်တွေကတော့ ငရဲပြည်ထက် အဆင့်မြင့်တဲ့ နည်းပညာတွေကို သုံးနိုင်လို့ ကြံဖန် ဂုဏ်ယူနေကြမလား မသိ။
သူ့စိတ်ထဲက တိတ္ထိကောင်ရေ ကုဋေကုဋာ အားနဲ့ အတွေးအင်ဂျင်က ဒီတင် မရပ်သေးဘူး။ ကမ္ဘာမပျက်ခင်မှာ ပွင့်မယ့် ဘုရားရှင်အကြောင်း ရှေးက ကျမ်းပြုသူတွေ ရေးထားတာ ကိုလည်းတွေးကြည့်တယ်။ ယာဉ်ရထားတွေက ဆင်မင်း ၇,၀၀၀ မြင်း ၁,၀၀၀ နဲ့မောင်းနှင်မယ့် ရထားယာဉ်တော် ခုနစ်ရာတဲ့။ ပဒေသရာဇ်ခေတ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးယာဉ်တွေကို ကြည့်ပြီး ရေးလိုက်တာ ဖြစ်ရမယ်။ တကယ်ဆို ကမ္ဘာမပျက်ခင်မို့လို့ ယာဉ်တွေက ခေတ်မီယာဉ်တွေပဲ ဖြစ်သင့်တာပေါ့။ ကမ္ဘာမပျက်ခင်မှာကိုပဲ လူတွေ ဟိုးကျောက်ခေတ်ကနေ evolution နဲ့ ပြန်စရမယ်ဆိုရင်တော့လည်း မသိဘူးပေါ့။
မြေကြီးအောက်မှာ ငရဲ၊ မိုးပေါ်မှာ ကောင်းကင်ဘုံဆိုတဲ့ အယူအဆတွေကလည်း ကမ္ဘာကြီးကို အုပ်စောင်းအောက်က နံပြားလိုလို ဘာလိုလို ယူဆထားတဲ့ ခေတ်က အတွေးအခေါ် တွေပဲလို့ သူက တွေးသေးတယ်။ အုပ်စောင်းဆိုတဲ့ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းထဲက အမြင့်တနေရာရာမှာ ကောင်းကင်ဘုံကြီး ရှိမယ်။ နံပြားအောက်မှာ မဟာမြေထုကြီး ရှိပြီး မြေထုကြီးအောက်မှာ ငရဲတွေရှိမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးပေါ့။
သူ့ အနေနဲ့ အံ့သြမိတာကတော့ ရှေးတုန်းက ကျမ်းပြုဆရာတွေက ငရဲတွေ၊ ကောင်းကင်ဘုံတွေရဲ့ ပထဝီဝင်ကိုကျတော့ ရေးပြီးတော့ ကမ္ဘာပေါ်ကတခြားဒေသတွေရဲ့ ပထဝီဝင်တွေ၊ တခြားဒေသက လူတွေရဲ့ အကြောင်းကိုကျတော့ ဘာလို့ မပြောကြတာတုန်းလို့ စဉ်းစားဖူးတယ်။ သူ့အဖေ ကိုလည်း မေးကြည့်ဖူးတယ်။ ကမ္ဘာ့ပထဝီဝင်က တရားရကြောင်း ငြိမ်းချမ်းကြောင်းတွေ မဟုတ်လို့ မဟောခဲ့တာ နေမှာပေါ့တဲ့။ ဒါဆို ဖွဲ့စည်းပုံမှားနေတဲ့ စကြဝဠာ အကြောင်းတွေ၊ တောင်မဟုတ်တဲ့တောင် တွေရဲ့ ပထဝီဝင်တွေကို ကျတော့ တရားရကြောင်းလည်း မဟုတ်ပဲနဲ့ ဘာလို့ ဘာသာရေးဆရာ တွေက ရေးခဲ့ကြသလဲလို့ သူကထပ်မေးလိုက်တော့ သူ့အဖေက သိပ်မတွေးနဲ့တဲ့။ တွေးနေလို့ ဘာမှဖြစ်မလာဘူးတဲ့။ သူကတော့ အဲလို မထင်ဘူး။ နမူနာ ယူစရာ စံ ဖြစ်တဲ့ ဘုရားတောင် ဘုရားဖြစ်အောင် တောထွက်ဖို့ အတွေးတွေကနေ စခဲ့ရတာမဟုတ်လား။
သူ့အတွက်တော့ ဘာသာရေးတွေဟာ ကရုဏာနံ့နဲ့ထုံတဲ့ နိမိတ်ပုံတွေထက် ဘာမှ မပိုဘူး။ အဲဒါကို ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း သူပြောမပြဖြစ်ဘူး။ လူတချို့ကလည်း မလွယ်ဘူးမို့လား။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် ပြန်ကြွလာပြီး သူ မဟောခဲ့တာ တချို့တွေကို မဟောခဲ့ကြောင်း လာထောက်ပြရင်တောင် လူတွေက သူတို့ လှေနံဓားထစ် လက်ခံထားတာတွေနဲ့ မတူလို့ ဓမ္မန္တရယ်လို့ သတ်မှတ်ချင် သတ်မှတ်နေကြမှာ။
“ပဒေသရာဇ်ခေတ်ရဲ့ အနုပညာတွေကပဲ ပြောင်မြောက်လွန်းခဲ့သလား။ မလိမ်ဖို့ ဆုံးမနေကြတဲ့ အရာတွေ ကိုယ်၌မှာ ဘာလို့မုသားဖြူတွေ ပါနေရတာလဲ။ နိမိတ်ပုံတွေနဲ့ ပညာပေးတာကို ဒဲ့ယူလိုက်သည်အထိ ငါတို့တွေကပဲ တုံးနေကြပြီလား။ အိုင်တီခေတ်က လူတွေတော့ ပဒေသရာဇ်ခေတ်က မှော်အောင်သူတွေရဲ့ ပညာပြမှုကို ရေရေလည်လည် ခံနေရပြီ။ လူ့ဦးနှောက်တွေဟာ ဘာလို့ ထင်ယောင်ထင်မှားဘက်မှာ ပိုသန်နေကြတာလဲ။ ဘီလူးအရိုးစုတွေကို လိုက်မရှာကြတာကပဲ တော်သေးတယ်။”
“အတင်းအကြပ် ယုံကြည်ခိုင်းမှု ဆိုတာကတော့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး အာဏာရှင် စနစ်ပါပဲ။ လူတွေဟာ သူတို့မလုပ်ချင်တဲ့ ဟမ္မူရာဘီ ကိုဓဥပဒေကိုတော့ သဘာဝတရားကြီးအား အတင်းအကြပ် တာဝန်လွှဲအပ်ခဲ့ပြီ။ ငါ့စိတ်ထဲမှာ သဘာဝအလျောက် ပေါ်လာတဲ့ လောဂျစ်ဆန်ဆန် ဂျစ်ကန်ကန် အတွေးတွေက စော်ကားလိုစိတ် မပါလည်းပဲ ငရဲဝင်ခွင့်တွေလား။ ပဒေသရာဇ်ခေတ်က မိုင်းဗုံးတွေကို ငါတို့ ဘယ်လိုရှင်းကြမလဲ။”
“မိရိုးဖလာအဆင့်နဲ့ ကျေနပ်မနေနဲ့လို့ ဆုံးမခဲ့သူတွေကို ငါမုန်းချင်တယ်။ ပိုဖတ်ဖြစ်လို့ ပိုသိလာမှ သံသယတွေ ပိုကြံ့ခိုင်လာခဲ့တာလေ။ ခုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လှည့်ဖျားမှုအတတ်ကို ငါလုံးလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီ” သူ့အတွေးတွေကို ကြောက်စိတ်က ဘရိတ်လာအုပ်လို့ တပိုင်းတစနဲ့ ရပ်သွားတယ်။
သူ့အတွေးတွေကို သူတောင် ပြန်လန့်နေတာမို့ လူက ထိုင်နေပေမယ့် စိတ်က နပန်းသမားတယောက်လို ရုန်းကန်နေရတယ်။ ကိုယ့်ငယ်ငယ်က အစွဲကို ကိုယ်ပြန်ဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့ ဆိုတာက ကိုယ့်ဂိုးကိုယ် ပြန်သွင်းရမယ့် ပယ်နယ်တီ တလုံးလိုပဲ။ ခုတော့ ကောင်းကင်ပေါ်က လက်တံတချောင်း ထွက်လာပြီး သူ့ကို လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးနေသယောင် ခံစားနေရတယ်။ အရပ်ရှစ်မျက်နှာ မှာလည်း လက်ညှိုးတွေ..လက်ညှိုးတွေ၊ နောက်ဆုံး လမ်းလျှောက်ရင်တောင် မြေကြီးပေါ်ကနေ သူ့ကို ထိုးတဲ့ လက်ညှိုးတွေ ထွက်ထွက်လာတာမို့ မနင်းမိအောင် မနည်းရှောင်နေရတယ်။ အင်္ဂုလိမာလရေ…မြန်မြန်လာကယ်ပါတော့။
သူများယုံကြည်တိုင်း လိုက်ယုံကြည်ရန် မလိုတော့။ လူအုပ်ကြီးထဲမှာနေရင်းနဲ့ အထီးမကျန်တော့။ အမြင်မတူယုံနဲ့ ထိုးလာမယ့် လက်ညှိုးတွေ မရှိတော့။
ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်စရာ မလိုတော့၊
အခုဆိုရင် သူ့ဘက်မှာ ဆွဲချ ရှစ်ဖော်တောင် ရှိလာပြီမို့ သူ့ရင်ခုန်သံတွေ နည်းနည်းမြန်လာတယ်။ ထွက်ပေါက်ကနေ သူရင်ကော့ပြီး ထွက်သွားဖို့ ပြင်လိုက်ပြီးမှ တစုံတရာကိုတွေးမိပြီး သူခေါင်းငိုက်စိုက် ကျသွားပြန်တယ်။
“တကယ်လို့ ခင်ဗျားဟာ မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီး သေမယ်ဆိုပါတော့။ တချို့က ခင်ဗျားကို မိဘကို စော်ကားထားလို့လို့ သမုတ်ကြလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီး သေတဲ့လူနဲ့ ကားတိုက်ပြီး သေတဲ့လူက အတူတူပါပဲ။ ထီ ဆုကြီးပေါက်တဲ့လူနဲ့ ဆုသေးပေါက်တဲ့လူလောက်ပဲ ကွာတယ်။”
“ခင်ဗျား ဝရဇိန်လက်နက် မှန်ပြီး သေသွားလို့ အဲလို သမုတ်ခံရရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ခင်ဗျားအနေနဲ့ သေရာကနေ ကုန်းရုန်းထပြီးတော့ သမုတ်တဲ့သူရဲ့ အိပ်မက်ထဲ ဝင်ပြီး ဒီလိုဆို သစ်ပင်တွေလည်း မိဘကို စော်ကားလို့ပေါ့နော်..ဘာညာနဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ မသာရုပ်ကြီးအားကိုးနဲ့ ဖြဲချောက်ပစ်လိုက် လို့ရတယ်။ အဲဒီ့လူကို
နားရွက်ဆွဲပြီး မိုးကြိုးလွှဲတွေအကြောင်း ပြောပြလိုက်လို့လည်း ရသေးတယ်။ ဒါမှ လက်မခံသေးလည်း အဲဒီ့အကောင်ကို ဂုတ်သာ ချိုးပစ်လိုက်ပေတော့။”
“ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ရတာ ကျတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘူးဗျ။ ဘဝကို အရှုံးပေးသွားမှန်း ထင်ရှားတယ်။ suicide လုပ်တာကို do လို့တောင် မသုံးကြဘူး။ commit တဲ့။”
ကျန်ရစ်သူတွေက အခွင့်ကြုံတိုင်း သူ့ကို အရှုံးသမားတယောက်လို ပြော ပြော နေကြမှာကိုတော့ သူမလိုလားဘူး။ သူစိတ်ကူးယဉ်ထားတာက ဒီလို။ သူ့ကိုယ်သူ အဆုံးစီရင်လိုက်ရင်တောင် ဘယ်သူကမှ သူအဆုံးစီရင်သွားမှန်း မရိပ်မိစေရဘူး။ သွေးရိုးသားရိုး accident တခုခုနဲ့ သေသွားတာ လို့ပဲ ထင်ခဲ့စေချင်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် စာရေးဆရာ မင်းဆွေ လိုမျိုး ရုတ်တရက်ပျောက်သွားတာမျိုးဆို ပိုသဘောကျတယ်။ မင်းဆွေက ဆေးလိပ်ဝယ်ဖို့ အိမ်ကနေ ထွက်သွားရင်း ပျောက်သွားတာလေ။
သူ ခဏခဏ မက်တဲ့ အိပ်မက်တခုရှိတယ်။ အိမ်ကို…အဘိုးတို့ဆီ အလည် သွားမယ်လို့ ညာပြော။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကို ဘယ်သူမှ မသိတဲ့ ကမ်းခြေမြို့တမြို့ကို တိတ်တိတ်ကလေး သွားပြီး လှေတစီး ငှားမယ်။ အင်း..ငှားတာက မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးထင်တယ်။ စပေါ်ပေးရတာက ကိစ္စမရှိဘူး။ မှတ်ပုံတင်တွေ ဘာတွေ ပြခိုင်းနေရင် ဒုက္ခ။ လှေကို အပိုင်ဝယ်လိုက်တာ အေးတယ်။ ပြီးတော့ ပင်လယ်ထဲကို လှေလေးနဲ့သွား။ ပင်လယ်ထဲရောက်တော့မှ ရေအောက်ကမ္ဘာထဲကို ခုန်ချ။ လှေကလေးကတော့ ဆက်မျောသွားမယ်။
သူ့အမေနဲ့ အဖေကတော့ သတင်းစာမှာ လူပျောက်ကြော်ညာ ထည့်ချင် ထည့်ကြလိမ့်မယ်။ “မောင်မရဏမင်း သည် အဘိုးအဘွားများရှိရာ မကွေးမြို့သို့ အလည်အပတ် သွားရောက်မည်ဟုပြောသွားကာ ပျောက်ဆုံး သွားပါသဖြင့်” …ဘာညာပေါ့။ သြော်… “မရဏမင်း” ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ လိုက်ရှာရဲမယ်လို့လည်း မထင်ဘူး။ သူပြုံးရင်းနဲ့ ချရေးလိုက်တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမှန်းသိသွားရင် အရှုံးသမားလို့ သတ်မှတ်ကြလိမ့်မယ်။
နေခြည့်ပါးစပ်ဖျားမှာ သူ့နာမည် ပန်းလိုပွင့်ခဲ့တယ်။
နေခြည်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဆို သူ့ရင်တွေက ညိမ့်ညိမ့်လေး ခုန်လေ့ရှိတယ်။သူ့ရင်ခုန်သံ ညိမ့်ညိမ့်လေးကိုသာ ဂီတအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ့် converter တခုရှိရင် ခေါင်းလောင်းသံ ချိုချိုလေးတွေ ထွက်မှာပဲ။
“မြတ်နိုးမှု” ဆိုတဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ လျှို့ဝှက်ခက်ဆစ်လေးကို ရင်ဘတ်ထဲမှာ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း စကားပြောနေတဲ့ သူ့ကို နေခြည် ကြည့်တတ်ရင်တော့ မျက်လုံးတွေထဲမှာ လေးနက်တဲ့ အချစ်တွေ တူတူပုန်း နေတာကို တွေ့လိမ့်မယ်။ သူ့ဦးနှောက်ဟာ နေခြည်ဆိုတဲ့ ဖိုင်တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ဖိုဒါပေါ့။
ဖြစ်နိုင်ရင် သူ့ရင်ထဲမှာ နေခြည်အေးအေးလေးနဲ့ ၂၄ နာရီလုံး လင်းချင်တယ်။
နေခြည်ဆိုတဲ့ သတ္တဝါမလေးဟာ သူ့စိတ်ကို နူးညံ့မှုတွေ အသာခြုံလွှမ်းပေးတဲ့ ကဗျာကုန်ကြမ်းလေးပါပဲ။ သူ့ရင်ထဲက အချစ်တွေကို ကဗျာယူနစ်နဲ့သာ တိုင်းမယ်ဆိုရင် အခုဆို ယူနစ် ၂၀ ကျော်နေလောက်ပြီ။
နေခြည့်ရဲ့ နှုတ်ဆက်သံလေးက သူ့အတွက် ‘ကဗျာတိုတပိုဒ်ရဲ့အပိတ်’ ဆိုရင် သူ့ကို စိတ်အာဟာရ ပေးလေ့ရှိတဲ့ မျက်နှာလေးကတော့ သူ့အတွက် ‘ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်’ ပေါ့။
ဒါပေမယ့် ကံဆိုးတယ်…သူရော နေခြည်ရော အရမ်း ကံဆိုးတယ်။
အကြောင်းကတော့ နေခြည်ဟာ သူ့မွေးစားညီမလေး ဖြစ်တဲ့အပြင် တဝမ်းကွဲ ညီမလေးမို့လို့ ပါပဲ။ နေခြည့်မိဘတွေက ဟိုးငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဆုံးသွားလို့ သူ့အဖေနဲ့ အမေက မွေးစားထားတာ။
ဒါပေမယ့် သူ နေခြည်အပေါ် ထားတဲ့ အချစ်က ၅၂၈ မကပေမယ့် ၁၅၀၀ မီးတောက် အစစ်ကြီး မဟုတ်တာတော့ သေချာ ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အချစ်ဟာ မြတ်နိုးခြင်းသက်သက်၊ အတူရှိနေလိုခြင်း သက်သက်၊ မေတ္တာနဲ့ မိုးပေးလိုခြင်း သက်သက်၊ တဘဝလုံး မျှဝေခံစားလိုခြင်း သက်သက် ၊ စောင့်ရှောက်ပေးလိုခြင်း သက်သက်တွေ ဆိုတာကို သူ အာမ ခံရဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေခြည် တခြားယောကျာ်းလေးတွေနဲ့ စကားပြောနေတာတွေ၊ ပြုံးပြ နှုတ်ဆက် တာမျိုးတွေကို သူမြင်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ဆိုရင်တော့ သူ့သောကတွေဟာ အနီရောင်ရင့်ပြီးတော့ မီးတောက်တွေလို ပွင့်ဖွာတတ်တယ်။
သူ့စိတ်ထဲမှာ အဲလိုစောက်သုံးမကျတဲ့ မိစ္ဆာသရဲသဘက်ကလေး ငယ်စဉ်ကတည်းက တဖြည်းဖြည်း ကြီးပြင်းလာတာကို သူသတိထားမိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ နောက်ကျသွားပြီ။ အဲဒီ့ သရဲသဘက်လေးကို သူကြိုးစားသတ်ကြည့်ပေမယ့်လည်း သတ်လေလေ မကောင်းဆိုးဝါးကောင် လေးက ကြီးထွားလေလေ။ သူရည်းစားတွေ တယောက်ပြီး တယောက်ထားကြည့်တယ်။ မရဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ အဲဒီ့ မင်စာ သရဲသဘက် လေးကို သူသတ်ဖို့ မကြိုးစားတော့ပဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေလိုက်ရတော့တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစပိုင်းမှာတော့ သူ့စိတ်သူ ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အင်း…အဲဒါဆိုရင် သိပ်တော့မတိကျဘူး။ တကယ်က သူ့ အချစ်စိတ်တွေကို သူ မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူး။ သူထိန်းချုပ်နိုင်တာက ကာယကံရယ်၊ ဝစီကံရယ်ပဲ။ နောက်တော့ နေခြည်က ကျော်ကျော်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ ရည်းစားဖြစ်သွားတယ်။ သူအိမ်ကို တိုင်ဖို့ စဉ်းစားလိုက်သေးပေမယ့် နေခြည်ရည်းစားရသွားတာလည်း တမျိုးကောင်းတာပဲလို့ စဉ်းစားမိလို့ မတိုင်ဖြစ်တော့ဘူး။
ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ မျက်လုံးတွေက နေခြည့်ကို လိမ်တတ်ပုံမရပါဘူး။ သူ့မျက်နှာပေါ်မှာ မကြာခဏ ကြေညာသွားမိတတ်တဲ့ မနာလိုမှု အထောက်အထား တွေရယ်၊ သူ့ ကွန်ပျူတာထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ မြတ်နိုးမှု အထောက်အထား ဓာတ်ပုံတွေရယ်၊ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာပြီး နေခြည့်အခန်းထဲ စကားသွားသွားပြီး ပြောသလိုမျိုး သံယောဇဉ်အထောက်အထားတွေရယ်၊ ဂရုစိုက်လွန်မှုတွေရယ်ကြောင့် နေခြည်လည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရိပ်မိလာပြီလို့ သူထင်နေတယ်။
တရက်တော့ နေခြည့်အခန်းထဲကို စကားသွားပြောရင်းနဲ့ နေခြည့်စားပွဲပေါ်မှာ သော့ခတ်ထားနေကျ နေခြည့် ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ကလေးကို သော့မခတ်ပဲနဲ့ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ညကျတော့ သူ ဘယ်လို စိတ်ရူးပေါက်လာမှန်းမသိဘူး။ အဲဒီ့ ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ကို ဖတ်ချင်စိတ် အရမ်းပြင်းပြလာတာနဲ့ နေခြည့်အခန်းဆီ သွားပြီး တံခါးကို အသာလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဟင်! နေခြည်က ဂျက်ထိုးမထားဘူး။ အခန်းက မှောင်မဲနေတယ်။ သူ အခန်းဝက နေခြည့် စာကြည့်စားပွဲကို ဖြည်းဖြည်းချင်း စမ်းလိုက်တယ်။
ဟိုက်၊ နေခြည်နိုးသွားပြီ။ နေခြည်က တခုခုဆို သူ့ကိုပဲ တတတ်တယ်။ “ဟ။ နေခြည်…ငါပါဟ။ နင်ကလည်း ဒီအိမ်ထဲကို တခြား ဘယ်သူဝင်လို့ ရမှာတုန်း။ ငါ့စာအုပ် တအုပ်မတွေ့လို့ နင့်စားပွဲပေါ်မှာများ ကျန်ခဲ့သလားလို့ ငါလာရှာတာ”
တအိမ်လုံးနိုးလာပြီး နေခြည့်အခန်းဆီ ရောက်လာကြတယ်။ သူကတော့ စာအုပ်ရှာချင်ယောင် ခဏဆောင်လိုက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်သလို မျက်လုံးတွေကို အပြင်ပန်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ပစ်လိုက်တယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေ ပြန်အိပ်ပျော် မပျော်တော့ မသိဘူး။ သူ့မျက်လုံးတွေကတော့ နောက်နေ့မနက်လင်းသည် အထိ တညလုံး နိုက်ဂျူတီ ဆင်းလိုက်ရတယ်။ သူ့အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာတော့ အတွေးပျက်အကောင်ပေါက်များ သွေးပျက်ကယောင်ခြောက်ခြားနဲ့ လမ်းသလားလို့။
ညနေက နေခြည့်အခန်းထဲကို သူ ဘာစာအုပ်မှ ယူမသွားခဲ့တာကိုတော့ သူနဲ့နေခြည် နှစ်ယောက်တည်းပဲ သိလိမ့်မယ်။
ခုဆို သူ့စိတ်ဟာ သော့ခတ်ထားတုန်းပေမယ့်လည်း မလုံခြုံတော့ဘူး။ နေခြည်ကိုလည်း ရင်မဆိုင်ရဲတော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ သူ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ စိတ်တွေကို အဖေနဲ့ အမေပါ တစွန်းတစ သိများ သိသွားပြီလား။
နောက်ဆုံးတော့…စိတ်အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လိုဖြစ်ငြား ရန်ကုန်မှာ သင်တန်းတွေ သွားတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်မှာ သူသိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး။ အမေဘက်က အဘိုး တောင်ကြီးမှာ ဆေးရုံလာတက်ရင်း ဆုံးသွားတာနဲ့ တောင်ကြီးကို သူခဏဆိုပြီး ပြန်လာခဲ့ရတယ်။ သူကတော့ ကြိုတင် မျှော်လင့်ပြီးသားဖြစ်တာရယ်၊ အဘိုးနောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာ မတွေ့လိုက်ရတာရယ်ကြောင့် သိပ်မခံစားရပါဘူး။ နေခြည်ကတော့ တော်တော်နွမ်းနေပုံ ရတယ်။
“ကိုကို…နေခြည်တို့ ရှုခင်းသာဘက် သွားရအောင်လေ။ ပြီးတော့ ဆိုင်ကယ်လျှောက်စီးရအောင်”
ရှုခင်းသာထဲက လေထုက သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်နေပေမယ့် သူ့ရင်ထဲမှာတော့ ဘာလို့မှန်းမသိ နွမ်းဖတ်နေတယ်။
“နေခြည် …ကျော်ကျော်နဲ့ အခြေအနေရော”
“နေခြည်တို့ ပြတ်သွားကြပြီ ကိုကို”
“မဟုတ်ဘူး။ နေခြည်က ဖြတ်လိုက်တာ”
“နေခြည် အစကတည်းက သူ့ကို တကယ် မချစ်ဘူးကိုကို”
“ဟာ! ဒါဆို အစကတည်းက မတွဲနဲ့ပေါ့။ ဘာလို့ တွဲနေသေးတုန်း”
“ဘာ!!!” နေခြည့်စကားကြောင့် သူ ရှက်လည်းရှက် ဒေါသလည်း အရမ်းထွက်သွားတယ်။
“အဲဒါ ငါနဲ့ ဘာဆိုင်လို့တုန်း။ ငါက အဲလောက်တောင် ကြောက်စရာ ကောင်းနေပြီလား။ ငါ….ငါ….” သူဘာဆက်ပြောရမှန်း မသိတော့ဘူး။ “တောက်!” သူ့ကိုယ်သူ မုန်းတီးမှုနဲ့ သူ တောက်တချက် ခေါက်လိုက်တယ်။
“မဟုတ်ဘူးကိုကို…အဲလို မဟုတ်ဘူး” နေခြည့်မျက်နှာမှာ မျက်ရည်တွေ ရွှဲနေတယ်။ “နေခြည်ပြောချင်တာက နေခြည်” နေခြည့်စကားက ရပ်သွားတယ်။
“နေခြည်… ကိုကိုရေးလက်စ ကဗျာနှစ်ပုဒ်ကို ကိုကို့ ကွန်ပျူတာထဲကနေ ဖတ်ဖူးတယ် ကိုကို။ တပုဒ်က ကိုကို့ စိတ်ပဋိပက္ခတွေ အကြောင်း” နေခြည့်စကားက ရပ်သွားပြန်တယ်။ သူကတော့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ သက်ပြင်းရှည် တချက် ချလိုက်တယ်။
“ကိုကို နေခြည့်ကို ချစ်နေတာကို သိလိုက်ရတယ်။ နေခြည်လည်း ကိုကို့ကို ချစ်မိနေပြီ ကိုကို။ ပြီးတော့ ကိုကို့လိုပဲ အပြစ်မကင်းတဲ့ စိတ်တွေ ခံစားနေရတယ်။ ဒါနဲ့ နေခြည်လည်း စိတ်များပြောင်းသွားမလားဆိုပြီး ကိုကျော့်အချစ်ကို လက်ခံလိုက်တာ” နေခြည်က ပြောရင်းနဲ့ ဆက်ငိုနေတုန်းပဲ။
သူ နေခြည့် ဘယ်လက်လေးကို လှမ်းယူပြီးတော့ တယုတယ ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ နေခြည်က သူ့နားတိုးလာပြီးတော့ ခေါင်းလေးကို သူ့ပုခုံးပေါ် မီလိုက်တယ်။
သူအမှတ်တမဲ့နဲ့ ခေါင်းကို ဘယ်ဘက်ကို လှည့်ပြီး ကြည့်လိုက်မိတော့ ဒေါက်တာ ဦးစံလွင်တို့။ နေခြည်ကတော့ မမြင်ဘူး။ သူကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ဒေါက်တာ ဦးစံလွင်တို့က မျက်နှာလွှဲသွားကြတယ်။ သြော်…မြင်ပြီးမှတော့လည်း မထူးတော့ပါဘူး။
“ကိုကို…နေခြည် စုဠာမုဏိ ဘုရားသွားချင်တယ်။ ဘုရား သွားပြီး ဆုတောင်း ရအောင်နော်”
“အင်း…ကောင်းသားပဲ” သူကတော့ လောလောဆယ် ဒေါက်တာ ဦးစံလွင်တို့ သူနဲ့ နေခြည့်ကို မြင်သွားလို့ စိတ်ရှုပ်နေတယ်။ ပန်းခြံထဲကနေ အမြန်ခွာရရင် ပြီးရော။
ဆိုင်ကယ်က ဘုရားဆီ ဦးတည်သွားနေပေမယ့် သူ့စိတ်ကတော့ အကုသိုလ်တွေ ပေါ်မှာ ကျက်စားနေတယ်။
“ဒီနေ့ အဖြစ်အပျက်တွေက မြန်လွန်းတယ်။ နေခြည်ကလည်း ငါ့ကို ချစ်သတဲ့။ ငါအကြီးအကျယ် မှားခဲ့ပြီထင်တယ်။ နေခြည့်ကို သွေးဆောင် ဖျားယောင်းခဲ့သလိုများ ဖြစ်ခဲ့ပြီလား။ တကယ်ဆို ငါက အကြီးပဲ။ အစစ အရာရာ ဆင်ခြင်သင့်တာပေါ့။ နေခြည်လေးလည်း စိတ်ပဋိပက္ခ ခံစားနေရ ရှာမှာပဲ။ ငါတို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို… လူမဆန်စွာ စိတ်ဖောက်ပြန်မှုလို့ ခေါ်သင့်သလား။ ရှေးတုန်းကတော့ လူတွေတင် မကဘူး၊ ဂရိ ဒဏ္ဍာရီထဲက နတ်ဘုရားတွေ၊ နတ်ဘုရားမ တွေတောင် မောင်နှမ အချင်းချင်း လက်ထပ်ခဲ့ကြ သတဲ့။ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားရဲ့ အဖေတူ အမေကွဲ ညီတော် နန္ဒမင်းသားလေးနဲ့ သူ့ရဲ့ ကြင်ယာတော် ဇနပဒ ကလျာဏီဆိုလည်း မောင်နှမတွေ ပါပဲ။ အဲဒါတွေက ရှေးတုန်းက မို့လို့ဆိုရင် ဓမ္မတို့ အဓမ္မတို့ ဆိုတာတွေဟာ ခေတ်တွေ၊ ကာလဒေသတွေရဲ့ ပြဌာန်းသတ်မှတ်ချက် သက်သက်ပဲလား။ အမှန်အမှား ဆုံးဖြတ်တာမှာ ဘာလို့ ပေတံတွေအမျိုးမျိုး ရှိနေကြတာလဲ။ တကယ်တော့ လောကကြီးမှာ ဘောင်ဝင်ခြင်း မဝင်ခြင်းကသာ အဓိက ကျနေတယ် ထင်တယ်။ ၂၀ ရာစုရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး သိပ္ပံပညာရှင် အိုင်းစတိုင်းရဲ့ ဒုတိယဇနီးဟာ အမေဘက်ကကြည့်ရင် အိုင်းစတိုင်းနဲ့ တဝမ်းကွဲ မောင်နှမ တော်စပ်တဲ့အပြင် အဖေဘက်က ကြည့်ရင်ပါ နှစ်ဝမ်းကွဲ ထပ်ပြီး တော်စပ်လိုက်သေး သတဲ့။ ဒီဘက်ခေတ်မှာလည်း တချို့ နိုင်ငံ တချို့ဒေသတွေမှာ မောင်နှမ ဝမ်းကွဲချင်း လက်ထပ်နေကြတုန်းပဲ မို့လား။ ခု…သူနဲ့ နေခြည်က လက်ထပ်ဖို့လည်း ရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တယောက်နဲ့ တယောက် ပြင်းထန်တဲ့ သံယောဇဉ်နဲ့ ချည်နှောင်သွားမိရုံလေးပါ။ မျိုးရိုးဗီဇ ပညာရှင်တွေကတော့ ဆွေမျိုးချင်း လက်မထပ်သင့်ဘူးတဲ့။ အင်း။ ဟုတ်မှာပါ။ နောက်ဆုံးတော့ ကာလဒေသနဲ့ အံဝင်အောင် မနေနိုင်တဲ့ ငါ့ရဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ စိတ်ကိုပဲ အပြစ်တင်ရတော့မှာပဲ။ ဒေါက်တာဦးစံလွင်တို့ကတော့ မြင်သွားပြီ။ အဖေနဲ့ အမေကို သူတို့ သွားများပြောနေမလား”
လမ်းကြားထဲက အရှိန်နဲ့ ထွက်လာတဲ့ ဆိုင်ကယ်က သူတို့ဆိုင်ကယ်ကို ဝင်တိုက်လို့ ဆိုင်ကယ်ရော နေခြည်ရော သူပါ လွင့်စင်သွားတော့တယ်။
နေခြည်သေသွားရတာ သူ့ကြောင့်လည်း ပါတယ် ဆိုတဲ့ အစွဲက သူ့စိတ်ကို ဖိစီးနေတယ်။ တကယ်ဆို
သူ ခုလို အဓိပ္ပါယ်မရှိ တဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး တွက်ချက်မှုတွေ လုပ်နေစရာတောင် မလိုပါဘူး။ နေခြည် သေသွားတာ တချက်တည်းနဲ့ တင် သူ့ကိုယ်သူ ခွင့်မလွှတ်သင့်ဘူးလို့လည်း တွေးနေမိတယ်။ အခု သူ့ရင်ထဲမှာ ဝေဒနာမျိုးစုံနဲ့ ပူလောင်နေတယ်။ အရပ်ရှစ်မျက်နှာမှာလည်း ဝေဒနာ မီးတောက်တွေ…သောက မီးတောက်တွေ။ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာပါ ပူလောင်သလို ရှိလာတာမို့ သူမျက်လုံးတွေကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။
“ဟင်! ငါဘယ်ရောက် နေတာပါလိမ့်။” သူမျက်လုံးတွေကို ထပ်ကစား ကြည့်လိုက်တယ်။ ဟာ! ဟိုမှာ…မီး..မီးတွေ!… သေချင်နေတဲ့ လူမိုက်တယောက်အတွက် ဘုရားသခင်က ရေကန်အသင့် ကြာအသင့် ဖန်တီးပေးလိုက်တာလား။ သူ့အကုသိုလ်တွေကို မျက်စေ့ဒေါက်ထောက်ကြည့်နေပုံရတဲ့ ကံကြမ္မာကပဲ ပထမပွဲမှာ အလဲမထိုးလိုက်နိုင်လို့ အညှိုးအတေးနဲ့ အကွက်ဆင် ဖန်တီးပေးလိုက်တာလား။ တကယ်ဆို သူအလိုရှိနေတဲ့ ဘုရားသခင်က မီးတောက်တွေအသွင်နဲ့ သူ့ကို ကူညီဖို့လာပြီလေ။ သူမီးတောက်တွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး မိတ်ဆွေ ဖွဲ့လိုက်သင့်တာပေါ့။
ဒါပေမယ့် မီးလောင်ပြီး သေရတာဟာ ဆိုးတယ်လို့ သူထင်လို့လား။ ဒါမှမဟုတ် မီးလောင်ပြီးပဲ အသားကင် တကောင်လို သေသေ၊ ဆိုင်ကယ်မှောက်ပြီးပဲ သွေးသံရဲရဲနဲ့ အသားတစ် တခုလို သေသေ၊ ရေနစ်လို့ ဖောယောင် ပုပ်ပွပြီးပဲ သေသေ၊ သတ္တဝါတွေဟာ သူခံနိုင်တဲ့ နာခြင်းအဆင့်တခုကို လွန်သွားရင် သတိလွတ်မေ့မျောသွားမှာမို့ တခုနဲ့ တခု ဝေဒနာ ခံစားရမှုချင်း သိပ်မကွာဘူးဆိုတာကို သူမယုံကြည်လို့လား။ ဒါမှမဟုတ် မွေးရာပါ ရှင်သန်လိုစိတ် ကြောင့်ပဲလား။
သူအခန်းထဲကနေ ပြေးထွက်ဖို့ ပြင်လိုက်တယ်။ အိုး…သူ့ ခြေထောက်တွေက လှုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ သူကျုံးအော်လိုက်တယ်။ “မီးဗျို့…မီး…မီး” “ကယ်ကြပါဦးဗျို့”
“မီး” လို့ အော်သံကြားတာနဲ့ ဒေါ်မြတ်မြတ်မင်းက အခန်းဆီကို အပြေးအလွှား ရောက်လာတယ်။
“သား…မာနမင်း…မီးက…မီးက ဘယ်မှာတုန်း” အခန်းထဲမှာတော့ မီးဆိုလို့ ဖယောင်းတိုင် မီးတခုပဲ ရှိတယ်။
“မီး…မီး…အမေ…မီး” မာနမင်းကတော့ ထိတ်လန့်တကြား ရေရွတ်နေတုန်း။
မာနမင်းရဲ့ အော်သံကြောင့် ဘေးအိမ်က လူတချို့ပါ ရောက်လာကြတယ်။
“သားလေး နေမကောင်းလို့ အိပ်မက်ယောင်ပြီး အော်နေတာပါ။ မီးလောင်တာ မဟုတ်ပါဘူးရှင်”
ဒေါ်မြတ်မြတ်မင်းက ဒိုင်ယာဇီပင် တလုံးယူပြီး မာနမင်းကို တိုက်လိုက်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ မရဏမင်း တဖြစ်လဲ မာနမင်းဟာ အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။
အိပ်မက်ထဲမှာတော့ မာနမင်းဟာ သူမရောက်ဖူးတဲ့ မြို့လေးမှာ လှေတစင်းကိုဝယ်….သြော်..ပင်လယ်ဆီကို သွားဖို့။
Posted by Kaung Kin Ko at 12:43 PM
"တကယ်ဆို လူတိုင်းနီးပါးက အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေသင့်တယ်။ နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းဟာလည်း သူတို့နိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေဟာ စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်လာပြီ၊ ရာနှုန်းပြည့်နီးပါးဖြစ်အောင် ဆက်လက်ကြိုးစားမယ် ဘာညာနဲ့ အပြိုင်အဆိုင် ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာ ကြေညာ နေသင့်တယ်။"
အဲဒိစာအုပ်လေးကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ၀ယ်လိုရရင် ကောင်း မှာပဲ အလင်းရောင်စာကြည့်တိုက်မှာ ထားခြင်လို့ပါ ။ စာပေ၀ါသနာရှင်တွေပေါင်းပြီး စာအုပ်တွေထုတ်ဝေနေကြတာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ မရှိသလောက်ရှားပါ တယ်။ပိုပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေး လုပ်ဖို ဘယ်သူမျာ အားထုတ်နိုင်မလဲနော်။ ကျနော်တော့ မတက်နိုင်ပါဘူး။ ဖျန့်ဝေရောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာ က ဖရီးရမဲ့ အာဝါတီးစာအုပ်တွေပဲ ပေါနေတယ်။ မရှိတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ခံစားချက်သက်သက် စာအုပ်တွေများများရှိစေချင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားဦးရေဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာအလုပ်သမား ဦးရေထက်ပိုများ ပါတယ်။ အနုပညားသမားတွေ စာပေသမာတွေဟာ အူသားတွေအတွက် အားဆေးတွေပါ။
“အတင်းအကြပ် ယုံကြည်ခိုင်းမှု ဆိုတာကတော့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး အာဏာရှင် စနစ်ပါပဲ။
“ထားပါတော့။ ခင်ဗျားကို ကျနော်က မသိဘူး၊ မသိလို့ မယုံဘူးဆိုပါတော့။ အဲလို ခင်ဗျားကို မသိရုံ၊ မယုံရုံလေးနဲ့ ခင်ဗျားက ကျနော့်ကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမယ် ဆိုရင် ခင်ဗျားတအား ကလေးဆန်တာပေါ့။ ဘုရားသခင်က အဲလို ကလေးဆန်ဆန် လူဆိုးကြီး ဟုတ်ပါ့မလား”
ဒီအတွေးတွေကို နှစ်ခြိုက်မိတိုင်း လူတွေရေးတဲ့ ဘုရားဟောကျမ်းစာအုပ်ထဲက စာသားတွေကို မြင်ယောင်မိပြန်ရော...
အလိုမတူပဲ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရတဲ့ အရာတွေထဲမှာ ဘာသာတရားဆိုတာ ပါနေသရွှေ့ အခုလိုဝတ္ထုတွေ ပေါ်ပေါက်နေဖို့ လိုပါတယ်။ အရည်အတွက်က သိပ်နည်းနေသေးလို့ များများဆက်ရေးပေးဖို့ တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်ဗျား။ ကောင်းကင်ကို ကျန်းမာပါစေ။
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး တကယ်. ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် သတ်သေလိုက်ချင်တယ်.. ဘ၀က ဘာလို့ ရှင်နေလဲကို မသိတော့တာကို.. နောက်ပြီး ကောင်းကျိုးတွေက များနေတော့လေ..း)
အတွေးအခေါ်ကောင်းတယ် ၊ အရေးအသားကောင်းတယ် ၊ တင်ပြပုံ၊ဥပမာပေးပုံ၊ မီးမောင်းထိုးပြပုံ၊ အားလုံးကောင်းလွန်းနေတယ်။ ဒီစာမျိုး ဒီနိုင်ငံမှာ ပုံနှိပ်ခွင့်ရဖို့ တော်တော်စောင့်ရမယ်။ ဘလော့ တွေရဲ့ကျေးဇူပဲ။ ဥရောပအတွေးအခေါ်တွေကလွှမ်းနေပေမယ့်၊ အသစ်ထိုးဖောက်ပြီး မိရိုးဖလာကိုတော်လှန် ၊ အတွေးစတွေကိုချည်ခင်ဖေါ်သလို တစ်စခြင်းဆွဲထုတ်၊ မိမိယုံကြည်ရာကို မလွတ်တမ်းတင်ပြထားပုံကဒီနေ့စာရေးဆရာတွေ အတုယူစရာကောင်းတယ်။ စာဆိုကိုလေးစားပါတယ်၊ ဂုဏ်လဲပြုပါတယ်။ ဆက်ပြီးရေးသားဖို့လဲတိုက်တွန်းပါတယ်။
အားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ကိုနောင်နောင်။း-)
Good day! My partner and I frequently publish guest articles or blog posts for other blog site owners to help gain publicity
to our work, as well as provide great content to site owners.
norman_almanza@letterboxes.org so we can communicate further.
Feel free to visit my blog :: arion
သေချင်နေတဲ့ လူလိမ္မာ (ဝတ္ထုတို) ("သေဆုံးတတ်သည်" စာအု...